होइन भन्दै विश्वास निर्माण गर्नुहोस्! | Martech Zone
मंगलवार, जुलाई 13, 2010 Douglas Karr
अन्तिम पटक कहिले हो तपाईं विक्रेताबाट ओर्लनुभयो र उनीहरूले भने,माफ गर्नुहोस्, हामी सायद त्यो मूल्य वा / वा ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्षम हुँदैनौं“। मसँग कहिले पनि छैन।
आज राती म एउटा करारबाट टाढा हिंडें जुन मैले आँखा बन्द गरेर गर्न सक्थें। जे होस्, मलाई थाहा छ कि सम्झौताको सरलता विकसित हुनेछ र गँड्यौलाहरूको ठूलो डिब्बा खोल्नेछ। मैले कसैको लागि ब्लग सेटअप गरेर स्थापना गर्थें, र पूर्वनिर्धारित रूपमा, म तिनीहरूको ब्लग समर्थन, उनीहरूको आईटी समर्थन र उनीहरूको होस्टिंग समर्थन बन्न चाहन्छु। म अनुमान लगाइरहेको छैन - म अनुभव बाट बोल्दै छु। यसैले म सम्भावित रूपमा सफ्टवेयरमा सेवा विक्रेताको जस्तै सन्दर्भ गर्दछु कम्पेन्डियम। (प्रकटीकरण: म एक शेयरधारक हुँ)
मैले ब्लगिंगका साथ सहयोग गर्ने ग्राहकहरू एक-समय अनुबंध होईन, हामीसँग जारी सम्बन्धहरू भनेको मुद्दाहरू ढाक्नको लागि हो। म तिनीहरूलाई कुनै पनि आवश्यकताको लागि सहयोग गर्न पाउँदा खुशी छु किनकि ती स्रोतहरू अपेक्षित छन्। त्यो कुरा आज रात थिएन ... म केवल अनुरोधबाट हिंडेँ किनभने यो मात्रaथियो परियोजना उद्धरण। कुनै वेब प्रोजेक्ट जस्तो चीज छैन जुन कम्पनी अन्तर्गत जान्छ ... सामग्री, डिजाइन, प्लेटफर्म, एकीकरण गर्न… हरेक वेब प्रोजेक्ट समयको साथ माग परिवर्तनको रूपमा विकसित हुँदै जान्छ। ब्लगिंग पनि गर्छ। र सफ्टवेयरको रूपमा एक सेवा (सास) फर्म चलिरहेको मुद्दाहरू र समर्थन ह्यान्डल गर्न डिजाइन गरिएको हो। म हैन।
मेरो बिन्दुमा फिर्ता ... सायद यदि अधिक कम्पनीहरूले अव्यावसायिक बजेट, पागल समयरेखा, र हास्यास्पद अपेक्षाहरू अस्वीकार गरे भने बाँकी इमानदार व्यवसायहरूले वास्तवमा हाम्रो सम्भाव्यताको साथ विश्वास निर्माण गर्न सक्दछन्। समस्या यति धेरै मानिसहरू त्यहाँ छन्, विशेष गरी अनलाइन मार्केटि and र सोशल मिडिया डोमेनमा, केहि पैसाबाट टाढा हिड्न डराउँछ।
धेरै विक्रेताहरूले ग्राहकको खर्चमा उनीहरूको बिल भुक्तानी गर्छन् वास्तवमै उनीहरूको आश्वासनको लागि पर्याप्त शुल्क लिन्छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ किनकि अर्को गरीब एसियाको ढोकामा हिड्नका लागि तुरून्त आक्रमण हुन्छ जसरी तिनीहरू त्यहाँ २-बिट चोर छन् बलात्कार, लुटपाट र भोज खाली गर्न।
यदि तपाईं एक समयावधिमा परियोजना पूरा गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंको वाचामा डेलिभर गर्नुहोस् वा काम गरेर साधारण आय कमाउन सक्नुहुनेछ भने किन तपाईं बिक्री लिनुहुन्छ? केहि महिना अगाडि, मैले एक महान मित्र र उनीहरूको फर्मसँग दुईवटा बाटो छुट्याउनुपर्‍यो किनभने हाम्रा परियोजनाहरू काम गरिरहेका थिएनन्। म तिनीहरूका अपेक्षाहरू पूरा गरिरहेको छैन ... र म मित्रता राख्छु र असफल हुन भन्दा पैसा गुमाउँदछु। र हामी प्रोजेक्टमा शानदार असफल हुने छौं मबाट टाढा हिंडे ... मलाई थाहा छ।
के म त्यो पैसा प्रयोग गर्न सक्छु? अवश्य! साना प्रोजेक्टहरू जस्तो कि व्यवसायमा नगदीको एक महान आम्रण हो र हामीलाई ठूला सम्झौताहरूको आउने र जाने बाटोमा लैजान सक्छ। मँ यो मात्र गर्न सक्दिन, यद्यपि। पछिल्लो दृष्टिमा, म मेरो व्यापार सुरु गरेदेखि धेरै साना सम्झौताहरूबाट टाढा भएको भए हुन्थ्यो।
विडम्बना यो हो कि यी तीनै ग्राहकहरू हुन् जसले मसँग सडकमा मलाई ठुलो वितरण गर्ने, राम्रो क्षतिपूर्ति र लचिलो समयरेखामा सडकमा पुग्छन्। प्रत्येक चोटि अब जब म "होईन" भन्छु, म जान्दछु कि म विश्वास निर्माण गर्दैछु र सडकमा राम्रो अवसर पाउने अवसर। तपाईंले पनि गर्नु पर्छ।
हामी वास्तवमै "No of the Power" वरिपरि सम्पूर्ण प्रस्तुति चलाउँछौं। हाम्रो आफ्नै एशले ली द्वारा लेखमा काम अस्वीकार गर्ने महत्त्वको बारेमा थप पढ्नुहोस्, यो मेरो काम होइन!